Soo degso Boeing 747-8i Cirka Hawada Koowaad FSX & P3D - Rikoooo
downloads 44 474
Updated on 01 / 08 / 2018: Model 3D oo cusbooneysiin ah (SSPX2012-748V4_GENX.mdl 2012 -> 2016), qaab cusub oo HD ah oo loogu talagalay Ciidamada Cirka (oo loo yaqaan Dagobert), qoraallo cusub oo habeenkii ah, FDE (Aircraft.cfg iyo 747-8GEnx.air), oo lagu daray V-Speed cabir, lagu daray cabirka "Ground Handling", cusboonaysiinta GPWS, deganaansho dheeri ah iyo run oo duulimaad ah. Prepar3D v4.3 iswaafaqsan
Air Force One waa calaamad call of diyaarad ka mid ah Ciidamada Cirka ee Maraykanka ee kaas oo ah Madaxweynaha Maraykanka ah.
Tan iyo 1990, raxan Madaxweynaha waxaa ka mid ah laba Boeing 747 si gaar ah u qalabaysan iyo dayac tiray si ay Madaxweynaha iyo kooxdiisa dhaqaajin karin furfurmi oo si ammaan ah iyadoo la ilaalinayo xiriir la hoggaamiyeyaasha rayidka iyo ciidankaba in ay sababi dareen-celin lahayn daahay xiisad.
FSX Air Force One Boeing 747-8i oo leh VC horumarsan oo Alejandro Rojas Lucena iyo VC textures casriyeyn ah ku sameeyay Enrique Cornejo.
Tani waxay ku siinaysaa B747 ah payware eegno qol dalwaddii iyo hadda la durraaxado maqaar cagaarka ah dhinacooda iyo dhinac ee kuraasta. Waxaa xitaa uu leeyahay jaakada pilot deldelay ee gadaalka dambe ee qol ah. The panel.cfg iyo aircraft.cfg ayaa lagu soo ururay oo bilaa saxar ah by Kooxda weydaarsi Flightsim ah.
Hadda waxaad arbushin kartaa ilaa "walxood oo aan" window in qol ku dalwaddii in ay si fudud u gaaro daaqadaha soo socda: GPS, hage, map, ATC, fuulid / radio altimeter / Baabbi'iyihii biiro, biiro auto-joojin, Rubuca ceejinta, saacad, descentometer, kneeboard iyo guddiga madaxa korkiisa. feature A cusub oo suuqa kala walxood waa biiro kulaylka pitot la jiro iyo muuqaalada (eeg XML by Enrique Cornejo).
autopilot The on shido leeyihiin nal cagaaran oo iyaga eegto more macquul ah. Xarunta aqoonsiga ATC in diyaarad ay tani tahay "Mid ka mid ah Boeing 747 Air Force". meel ka mid ah nalalka Nal ayaa go'an. view The qol ka kursiga pilot ee hadda waa raaxo badan, sababtoo ah masaafada in kursiga dheer waa. Diyaaradda ayaa views engine cusub iyo aragtida gudaha cusub VC. joojiyaha waxay leeyihiin nidaam joojiyaha kala ah in la sameeyo markooda macaan on dhulka. The Air Force One texture waa qaabab cajiib ah oo Professional by aan la garanayn, kaas oo ka mid ah faahfaahinta, qiiq dhabta ah ee afarta matoorada, views qol dheeraad ah, dhawaaqa macquul ah iyo nalalka VC habeen dheeraad ah macquul ah iyo qaabab habeenkii sooctey.
Halbeegyada kadhanka lafdhabarta ayaa sidoo kale la hagaajiyay, marka hadda leexleexday way sii jilicsan yihiin. Diyaaraddaan waxay adeegsaneysaa mashruuca loo yaqaan 'Open Open Sky' FSX Boeing B747-800 moodada OSX748V4_GENX (MDL), waxayna kujirtaa daaqada qiyaasta Posky Utility si aad u aragto jaranjarooyinka ugu waaweyn, adeega xamuulka qaada, iwm. Codadka matoorrada waxaa looshaqeeyaa sida kuwa dhabta ah ee leh iskudhiska basaska. Kombiyuutarka Maareynta Duullimaadka (FMC) wuu go'an yahay wuxuuna u eg yahay aalad qalabka wax lagu bixiyo. VC-da waxaa ka mid ah FMC, Muuqaalka Duulimaadka Fudud (PFD) iyo Bandhigga Waxqabadka Multi-Function (MDF) oo lagu soo bandhigay cabbirka saxda ah. Qalabka 'Virticit-ka' Virticit-ka wuxuu sidoo kale leeyahay Nidaamka-Feejignaanta iyo Fiilo-digniinta Nidaamka oo sidoo kale loo yaqaan EICAS, Nidaamka Digniinta Udhowrka Dhulka (GPWS), Nadiifiyaasha shaqeeya, nalalka guryaha, dab xakamaynta, duulista hawada, wareejinta shidaalka.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa nalalka laydhka ah, korantada tagaasida, matoorrada matoorrada, matoor APU, batteriga, wareejinta bilowga, wareejinta-barafka, nalalka guud. Lambarrada saacaddu hadda waxay ku jiraan oranjo taasoo ka dhigaysa inay u muuqdaan kuwo si wanaagsan u fudud oo la garan karo. Aruuriyay oo tifatiray FSX Waxaa aasaasay Aasaasihii Shirqoolka Duulimaadyada Diyaaradaha Enrique Cornejo.
Author: SkySpirit2011, Alrot, ayaa waxaa qoray Edgar Energo Cornejo, oo wax ka bedelay & ay dejisay Rikoooo, Air Force One oo uu ku dhajiyay Dagobert